Malunga Nathi-Goodao Technology Co., Ltd.
Inflator yesondo ledijithali
I-Metal tayara inflator
Isiguquli soMoya welori
ITire inflator yesithuthuthu sombane
Ipaki yokulungisa iTire
Iikhithi zokulungisa iTire
Impompo yokukhupha amanzi
I-Yuyao Jiaqiao Auto Accessories Co., Ltd. yinkampani ejongene nokuvelisa iintlobo ze-12VDC zemoto yomoya (i-inflator yevili lemoto), isicoci semoto, izixhobo ezingxamisekileyo ecaleni kwendlela kunye nezincedisi, njl njl. Ifumaneka kwimpuma yephondo laseZhejiang - Yuyao isixeko esikuhambo lweyure e-1 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNingbo Lishe (Izibuko leNingbo), kunye neeyure ezi-2 ngemoto ukusuka eHangzhou okanye eShanghai. Inkampani ithatha indawo ye-1500 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangama-80, iimveliso ezithunyelwa kwihlabathi liphela ngobuninzi bezatifikethi zokungena kumazwe aphesheya njenge-CE, RoHS, njl.
Njengomnye wefektri ekhokelayo kunye neyobuchwephesha, esekelwe kumgaqo-nkqubo womgangatho "ojoliswe kwikhwalithi, umthengi kuqala", siye saseka inkqubo yokulawula umgangatho echanekileyo kunye nokusebenza kakuhle. ISO 9001:2000 iziqinisekiso zenkqubo yolawulo lomgangatho zifunyenwe ngo-2006.
Ukuphucula izibonelelo zocelomngeni kukhuphiswano lwehlabathi lwamaxabiso kunye nokulawula umgangatho ngcono, siye saqulunqa eyethu iworkshop yeharware, iworkshop yeemoto, iworkshop yokutofa, ukudibanisa iworkshop, kunye neworkshop yokubumba. Uninzi lwezona nxalenye ziphambili zeemveliso zethu ziveliswa kumzi-mveliso wethu, zonke iimveliso ezigqityiweyo zivela kwimigca yethu yokuhlanganisana.Ngezi zixhobo zemveliso yobuchwephesha kunye neqela elibalaseleyo le-R & D, amandla ethu okuvelisa afikelela kwi-50,000 pcs air compressor okanye vacuum cleaners nyanga zonke. Siye saseka iziko lethu lolawulo lomgangatho, amaqela ophuhliso lwemveliso.
Ngeli xesha, ukomeleza iingenelo zomngeni kuqoqosho lwehlabathi lweenkonzo ezilungileyo, ngokwesiseko sokupasa isiqinisekiso senkqubo yolawulo ye-ISO9001, inkampani yamkelwe iERP, i-OA kunye nenkqubo yolawulo lweshishini le-E. Kwakhona siya kuqhubeka nokwazisa ubuchwephesha obuphambili basekhaya nabangaphandle kunye namava olawulo, kwaye sizame ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokhuphiswano. Uninzi lweemveliso zethu zinezatifikethi zamazwe ngamazwe ngoku.
IdilesiNo. 1279 Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao, Zhejiang, China